"လှည်းဦးတိုက်၊ လှေဦးတိုက် အိမ်၊ မြေနေရာမှာ နေသင့်၊ မနေသင့်" - Barnyar Barnyar
May 20, 2022 linn htet KNOWLEDGE 0
မြန်မာ့ရိုးရာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာနည်းမှာရော ဖုန်းရွှေပညာမှာရော အပြောများတဲ့ “လှည်းဦးတိုက်၊ လှေဦးတိုက်”မှာ မနေကောင်းဘူး၊ လှည်းလမ်း၊ ကားလမ်း၊ လူသွားလမ်း သုံးလမ်းဆုံတဲ့ လမ်းဆုံကို မျက်နှာမူပြီး အိမ်မဆောက်သင့်ဘူး။
ဖုန်းရွှေပညာစာအုပ်မှာတော့ …. (T) ပုံ လမ်းဆုံလမ်းခွလို့ ဆိုထားတယ်။ ဒီလိုမြေအနေအထားမျိုးကိုလည်း မြို့ပြအိမ်နေယာအကွက်တွေပေါ်မှာ အတွေ့များပါတယ်။ “လှည်းဦးတိုက်၊ လှေဦးတိုက်” မြေနေရာပေါ်မှာ အိမ်ဆောက်၊ တိုက်ဆောက်ထားတာ အများကြီးရှိပါတယ်။
“လှည်းဦးတိုက်၊ လှေဦးတိုက်” အိမ်ကတော့ ခိုက်တယ်။ အဲဒီအိမ်မှာ နေတဲ့သူတွေဟာ စီးပွားတိုးတက်မှုမရှိဘူး။ အိမ်တွင်းရေး၊ အိမ်ထောင်ရေးတွေမှာလည်း အဆင်မပြေဖြစ်မယ်။ ဖုန်းရွှေပညာမှာရော ၊ မြန်မာ့ရိုးရာ ရှေးထုံးအစဉ်လာနည်းမှာရော … မနေသင့် မနေထိုက်တဲ့ အိမ်နေရာအနေအထားမျိုးဖြစ်နေတယ်။
ဒါပေမယ့်…. မြန်မာ့ရိုးရာ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ နည်းမှာတော့ “လှည်းဦးတိုက်၊ လှေဦးတိုက်” နေရာမျိုး၊ အိမ်မျိုး၊ အဆောက်အဦးမျိုးမှာ စတိုးဆိုင်၊ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်၊ ဈေးဆိုင်တွေဖွင့်ရင်တော့ ကောင်းတယ်။ ဖွင့်သင့်တယ်လို့ပြောထားတယ်။
စောစောက ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ဗီဒီယို၊ ရုပ်ရှင်ရုံ၊ ကာရာအိုကေခန်းမ၊ ပျော်ပွဲစားရုံ၊ အရက်ဆိုင်၊ ဘီယာဆိုင်တွေကိုဖွင့်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့။ အမှန်တော့ “ဈေးကွက်မြင်ကွင်း” အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေလို့ပဲ။
ယုတ္တိဗေဒ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ စဉ်းစားကြည့်မယ်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်၊ ရှေ့တူရှုလမ်းရဲ့ ဟိုးအဝေးကတောင် ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်၊ ကိုယ့်ရဲ့ပွဲရုံကို မြင်နေရတယ်။ သုံးဘက်မြင်ကွင်း (3D) ဖြစ်နေတယ်။ “ဈေးကွက်မြင်ကွင်း” အားသာမှုရှိလို့ပြောရင် မှန်တယ်။
လူနေရင်ခိုက်တယ်ဆိုတာ ပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ။ “လှည်းဦးတိုက်၊ လှေဦးတိုက်”အိမ်ကို ခိုးခြင်၊ ဝှက်ချင်၊ လုယက်တိုက်ခိုက်ချင်တဲ့လူတွေက အဝေးကကြည့်ပြီး ထောက်လှမ်းလို့ လွယ်ကူတယ်။
လှည်းတွေ၊ ကားတွေ ရှေ့တူရှုလမ်းက တည့်တည့်မောင်းလာပြီး ကိုယ့်အိမ်ရှေ့မှာ ဘယ်ညာကွေ့သွားရင် ဖုန်တွေဟာ အိမ်ထဲတန်းဝင်လာမှာပဲ။ ရှေ့တူရှုလမ်းက အသုဘချလာပြီဆိုပါတော့ အဲဒီအနိဋ္ဌာရုံမြင်ကွင်းကြီးကို အချိန်တော်တော်ကြာကြာ မြင်တွေ့နေရမယ်။
ရွာတွေမှာဆိုရင် “လှည်းဦးတိုက်၊ လှေဦးတိုက်” တည့်တည့်ကို ရှေ့တူရှုလှည်းလမ်းကလာတဲ့ နွားအုပ်၊ ကျွဲအုပ်ထဲက တစ်ကောင်စ၊ နှစ်ကောင်စကျွံဝင်လာတာမျိုးကို ခနခဏခံရတယ်။ ဒါကယုတ္တိဗေဒ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ “လှည်းဦးတိုက်၊ လှေဦးတိုက်” မှာနေမကောင်းဘူး၊ အိမ်မဆောက်သင့်ဘူးလို့ ပြောတာပါ။
ဒါပေမယ့်… “ဒီလို “လှည်းဦးတိုက်၊လှေဦးတိုက်” နေရာမျိုးမှာ အိမ်ဆောက်မိပြီ၊ အိမ်ဆောက်ထားပြီဆိုင်ရင် ဘယ်လိုကွာကွယ်မလဲ၊ ဒါကလွယ်ပါတယ်။ တံခါးမကြီးကို လမ်းနဲ့တည့်တည့်နေရာက ပြောင်းပေးလိုက်ရမယ်။
ဒီနည်းထက် ပိုကောင်းတာကတော့ တံခါးရဲ့အပေါ်ဘက်၊ အိမ်အဝင်အ၀ တံခါးရဲ့အပေါ်ဘက်မှာ မှန်တစ်ချပ်ကာထား၊ ချိတ်ဆွဲထားရမယ်။ “လှည်းဦးတိုက်၊ လှေဦးတိုက်”အိမ်တွေမှာ မှန်ထောင်ထားတာ၊ မှန်ချိတ်ထားတာ တွေ့ရတယ်။
တချို့မှန်ချပ်တွေက သေးလွန်းတယ်၊ တချို့မှန်ချပ်တွေက ကြီးလွန်းတယ်။ ခြောက်လက်မပတ်လည် စတုရန်းပုံ ပုံရိပ်ထင်တဲ့ မှန်တစ်ချပ်ဖြစ်ရမယ်။ မှန်တစ်ချပ်ရဲ့အလယ်မှာ အနီရောင်နဲ့ စတုရန်းအကွက်လေး (1″or 2″)ပတ်လည် အကွက်လေးရေးထားရမယ်။
အိမ်ဝမှာ အသောကပင်တွေ စိုက်ထားတာမျိုး အုတ်တံတိုင်းမြင့်မြင့်ကာထားတာမျိုး၊ ရေပန်းတစ်ခု တပ်ထားတာမျိုးနဲ့လည်း ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် မြေအနေအထားအရ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး၊ မှန်ချပ်ကပ်တာ၊ ချိတ်တာပဲကောင်းပါတယ်။
အရေးကြီးဆုံးကတော့ …👍 ပုံလမ်းဆုံ, “ကြက်လျှာစွန်းပုံမြေနေရာ”, တြိဂံမြေကွက်ပေါ်မှာ ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်က အရှောင်သင့်ဆုံး အခိုက်ဆုံးမြေနေရာပါပဲ…#Credit မူရင်းစာရေးသူ ကိုဝင်းဇော်(သစ်တော)
“လှညျးဦးတိုကျ၊ လှဦေးတိုကျ အိမျ၊ မွနေရောမှာ နသေငျ့၊ မနသေငျ့”
မွနျမာ့ရိုးရာ ထုံးတမျးအစဉျအလာနညျးမှာရော ဖုနျးရှပေညာမှာရော အပွောမြားတဲ့ “လှညျးဦးတိုကျ၊ လှဦေးတိုကျ”မှာ မနကေောငျးဘူး၊ လှညျးလမျး၊ ကားလမျး၊ လူသှားလမျး သုံးလမျးဆုံတဲ့ လမျးဆုံကို မကျြနှာမူပွီး အိမျမဆောကျသငျ့ဘူး။
ဖုနျးရှပေညာစာအုပျမှာတော့ …. (T) ပုံ လမျးဆုံလမျးခှလို့ ဆိုထားတယျ။ ဒီလိုမွအေနအေထားမြိုးကိုလညျး မွို့ပွအိမျနယောအကှကျတှပေျေါမှာ အတှမြေ့ားပါတယျ။ “လှညျးဦးတိုကျ၊ လှဦေးတိုကျ” မွနေရောပျေါမှာ အိမျဆောကျ၊ တိုကျဆောကျထားတာ အမြားကွီးရှိပါတယျ။
“လှညျးဦးတိုကျ၊ လှဦေးတိုကျ” အိမျကတော့ ခိုကျတယျ။ အဲဒီအိမျမှာ နတေဲ့သူတှဟော စီးပှားတိုးတကျမှုမရှိဘူး။ အိမျတှငျးရေး၊ အိမျထောငျရေးတှမှောလညျး အဆငျမပွဖွေဈမယျ။ ဖုနျးရှပေညာမှာရော ၊ မွနျမာ့ရိုးရာ ရှေးထုံးအစဉျလာနညျးမှာရော … မနသေငျ့ မနထေိုကျတဲ့ အိမျနရောအနအေထားမြိုးဖွဈနတေယျ။
ဒါပမေယျ့…. မွနျမာ့ရိုးရာ ထုံးတမျးအစဉျအလာ နညျးမှာတော့ “လှညျးဦးတိုကျ၊ လှဦေးတိုကျ” နရောမြိုး၊ အိမျမြိုး၊ အဆောကျအဦးမြိုးမှာ စတိုးဆိုငျ၊ လ်ဘကျရညျဆိုငျ၊ ဈေးဆိုငျတှဖှေငျ့ရငျတော့ ကောငျးတယျ။ ဖှငျ့သငျ့တယျလို့ပွောထားတယျ။
စောစောက ပွောခဲ့တဲ့အတိုငျးပဲ ဗီဒီယို၊ ရုပျရှငျရုံ၊ ကာရာအိုကခေနျးမ၊ ပြျောပှဲစားရုံ၊ အရကျဆိုငျ၊ ဘီယာဆိုငျတှကေိုဖှငျ့ရငျ အကောငျးဆုံးပေါ့။ အမှနျတော့ “ဈေးကှကျမွငျကှငျး” အကောငျးဆုံး ဖွဈနလေို့ပဲ။
ယုတ်တိဗဒေ ဆငျခွငျတုံတရားနဲ့ စဉျးစားကွညျ့မယျ။ မကျြနှာခငျြးဆိုငျ၊ ရှတေူ့ရှုလမျးရဲ့ ဟိုးအဝေးကတောငျ ကိုယျ့ရဲ့ဆိုငျ၊ ကိုယျ့ရဲ့ပှဲရုံကို မွငျနရေတယျ။ သုံးဘကျမွငျကှငျး (3D) ဖွဈနတေယျ။ “ဈေးကှကျမွငျကှငျး” အားသာမှုရှိလို့ပွောရငျ မှနျတယျ။
လူနရေငျခိုကျတယျဆိုတာ ပွနျပွီးစဉျးစားကွညျ့ပါ။ “လှညျးဦးတိုကျ၊ လှဦေးတိုကျ”အိမျကို ခိုးခွငျ၊ ဝှကျခငျြ၊ လုယကျတိုကျခိုကျခငျြတဲ့လူတှကေ အဝေးကကွညျ့ပွီး ထောကျလှမျးလို့ လှယျကူတယျ။
လှညျးတှေ၊ ကားတှေ ရှတေူ့ရှုလမျးက တညျ့တညျ့မောငျးလာပွီး ကိုယျ့အိမျရှမှေ့ာ ဘယျညာကှသှေ့ားရငျ ဖုနျတှဟော အိမျထဲတနျးဝငျလာမှာပဲ။ ရှတေူ့ရှုလမျးက အသုဘခလြာပွီဆိုပါတော့ အဲဒီအနိဋ်ဌာရုံမွငျကှငျးကွီးကို အခြိနျတျောတျောကွာကွာ မွငျတှနေ့ရေမယျ။
ရှာတှမှောဆိုရငျ “လှညျးဦးတိုကျ၊ လှဦေးတိုကျ” တညျ့တညျ့ကို ရှတေူ့ရှုလှညျးလမျးကလာတဲ့ နှားအုပျ၊ ကြှဲအုပျထဲက တဈကောငျစ၊ နှဈကောငျစကြှံဝငျလာတာမြိုးကို ခနခဏခံရတယျ။ ဒါကယုတ်တိဗဒေ ဆငျခွငျတုံတရားနဲ့ “လှညျးဦးတိုကျ၊ လှဦေးတိုကျ” မှာနမေကောငျးဘူး၊ အိမျမဆောကျသငျ့ဘူးလို့ ပွောတာပါ။
ဒါပမေယျ့… “ဒီလို “လှညျးဦးတိုကျ၊လှဦေးတိုကျ” နရောမြိုးမှာ အိမျဆောကျမိပွီ၊ အိမျဆောကျထားပွီဆိုငျရငျ ဘယျလိုကှာကှယျမလဲ၊ ဒါကလှယျပါတယျ။ တံခါးမကွီးကို လမျးနဲ့တညျ့တညျ့နရောက ပွောငျးပေးလိုကျရမယျ။
ဒီနညျးထကျ ပိုကောငျးတာကတော့ တံခါးရဲ့အပျေါဘကျ၊ အိမျအဝငျအ၀ တံခါးရဲ့အပျေါဘကျမှာ မှနျတဈခပျြကာထား၊ ခြိတျဆှဲထားရမယျ။ “လှညျးဦးတိုကျ၊ လှဦေးတိုကျ”အိမျတှမှော မှနျထောငျထားတာ၊ မှနျခြိတျထားတာ တှရေ့တယျ။
တခြို့မှနျခပျြတှကေ သေးလှနျးတယျ၊ တခြို့မှနျခပျြတှကေ ကွီးလှနျးတယျ။ ခွောကျလကျမပတျလညျ စတုရနျးပုံ ပုံရိပျထငျတဲ့ မှနျတဈခပျြဖွဈရမယျ။ မှနျတဈခပျြရဲ့အလယျမှာ အနီရောငျနဲ့ စတုရနျးအကှကျလေး (1″or 2”)ပတျလညျ အကှကျလေးရေးထားရမယျ။
အိမျဝမှာ အသောကပငျတှေ စိုကျထားတာမြိုး အုတျတံတိုငျးမွငျ့မွငျ့ကာထားတာမြိုး၊ ရပေနျးတဈခု တပျထားတာမြိုးနဲ့လညျး ကာကှယျနိုငျတယျဆိုပမေယျ့ မွအေနအေထားအရ မဖွဈနိုငျပါဘူး၊ မှနျခပျြကပျတာ၊ ခြိတျတာပဲကောငျးပါတယျ။
အရေးကွီးဆုံးကတော့ …👍 ပုံလမျးဆုံ, “ကွကျလြှာစှနျးပုံမွနေရော”, တွိဂံမွကှေကျပျေါမှာ ဆောကျထားတဲ့ အိမျက အရှောငျသငျ့ဆုံး အခိုကျဆုံးမွနေရောပါပဲ…#Credit မူရငျးစာရေးသူ ကိုဝငျးဇျော(သဈတော)